China 15ml tavoahangy fitaratra tavoahangy tavoahangy mpamatsy mpamatsy sy mpanamboatra | Kingtone
Tavoahangy fitetezana vera mazava 15ml
Fampiasana indostrialy: Fanomezana
Ampiasao: Menaka tena ilaina
Laharana maodely: SL-359
Anaran'ny marika: kingtone, Kingtone
Fampiasana: tavoahangy mitete menaka ilaina
Fandoavam-bola: Union Paypal / TT / Westen
Loko: Toy ny sary
★ Fiarovana UV: ny tavoahangy fitaratra dia vita tamin'ny vera amber tsy mahazaka harafesina. Ny tavoahanginay dia tsy misy BPA, tsy misy firaka, miaraka amin'ny vera amber mahatohitra UV mba hiantohana fa voaaro tsara amin'ny menaka UV sy ny fitrandrahana haingana ny menaka sy menaka manitra entinao.
★ Tena mety amin'ny aromatherapy: Ny tavoahangy tavoahangy tsirairay dia misy droppers 4, izay mety aminao ny mameno menaka manitra ary manamboatra fangaro menaka manitra ilaina ho an'ny fanorana, salon de volo, aromatherapy ary mankafy ireo fotoana sarobidy momba ny fialan-tsasatra.
★ Volavola fanaporofoana mivaingana: ny vava tavoahangy ambonin'ny vava dia miaraka amina alim-pito vita amin'ny alim-pito vita amin'ny volamena, izay azo apetraka akaiky mba hisorohana tsara ny famoahana rano. Mba hisorohana ny fandanianao ny menakao sarobidy dia ataovy matevina kokoa izy io ary sorohy ny fisorohana.
Fitaovana momba ny vatana
Tavoahangy mitete menaka ilaina
Baoritra fanondranana mahazatra, paleta na arakaraka ny zavatra takian'ny mpanjifa.
Previous: Tavoahangy fivarotana tavoahangy mafana tavoahangy ilaina tavoahangy vera tavoahangy vita amin'ny vera 10-50ml kaontenera kosmetika
Manaraka: Tavoahangy fitetezana menaka ilaina menaka manitra miloko 50ml
Tavoahangy fivarotana tavoahangy mafana mivarotra tavoahangy ...
50ml loko fitaratra menaka fikolokoloana menaka manitra miloko ...
30ml amber-maivana-porofo fikarakarana hoditra mavo e ...
30ml tavoahangy menaka manitra ilaina menaka manitra ...